Zidane Oo U Hanjabaday PSG: "Waxaan Haysanaa Xidigo Yaqaan Sida Loo Xaliyo Dhibaatada" %
Tababaraha Real Madrid, ninka lagu magacaabo Zidane, oo wariyaasha la hadlayay kadib guushii 3-1 ahayd, taasoo ay minankooda uga gaareen Getafe, ayaa wuxuu daboolka ka qaaday inay aad isugu diyaariyeen ciyaarta PSG.
PSG iyo Real Madrid, ayaa isaga hor imaan doonaa lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, waxaana kulankooda uu dhici doonaa maalinta Talaada ah ee Isbuucaan, iyadoona Zidane, uu yahay mid diirada saaraya kulankaan.
Lugta hore ayaa waxay kusoo kala baxeen labadaan koox 3-1, taasoo ay guusha kusoo heshay Los Blancos, waxaana ay hada tahay mid ugu cad cad inay usoo baxdo wareega xiga, inkastoo ay wax walba dhici karaan.
“Aniga waxaan mar walba nahay kuwa diirada saara inay si fiican udheelaan kulan kasta, mana eegno Cilimada aan markaas ku jirno,” ayuu Hogaamiyaha Difaacadayaasha Champions League, usheegay warbaahinta.
“Waxaan mar walba nahay kuwa guul ku keeno xaalad walba oo ay ku jiraa [Dhibaato ama bandhig qurux badan],” ayuu hadalkiisa kusii daray macalinkaan dalka Faransiiska udhashay ee Madrid, leeliya.
“[Hadda] waxaan diirada sareyno [ayaa ah kulanka aan ka horjeedno PSG] diyaar ayaana unahay midaas, waxaana haysanaa ciyaaryahano, kuwaasoo yaqaan sida loo dejiyo xaaladaha adag,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
PSG vs Real MadridZidane
Shaxda Rasmiga Ah Brighton vs Arsenal Oo La Shaaciyay – Yaa Kusoo Bilowday Garoonka